Tababarka Korontada - GO! SPECTRUM SCHOOL (7E SPECIALIZATION YEAR // FULL-TIME // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
spectrum School > koorsooyinka our > 7e sannadka khaaska ah > Korontada Shaqaalaha
In 7e sanadka takhasuska korontada (tamar-maalmeedka / BSO) waxaad ku takhasusay aqoon isweydaarsiga, dayactirka iyo dayactirka wiishka, albaabada, kor u qaadayaasha (farsamada, sayniska kombiyuutarka, pneumatica, hydraulics); dhinaca kale ee qaybinta tamarta, wadidda iyo tiknoolajiyadda xoogga leh. Waa mid tababarka dhabta ah. Mashruucyo iyo layliyo, waxaad kordhinaysaa aqoontaada ku saabsan kumbuyuutarrada iyo farsamooyinka automation. Waxaad baraneysaa inaad siiso shaqo tayo leh ishaada ammaanka, caafimaadka iyo deegaanka.
Ma xiiseyneysaa qalabka korontada iyo mashiinada? Miyaad munaaqashooneysaa oo saxantahay? Ma jeceshahay inaad la shaqeyso gacmahaaga, laakin sidoo kale kombiyuutarka?